संक्रमितको संख्या शून्यमा झारेर भाइरसमुक्त भइसकेको देशमा अचानक लकडाउन फेल ! – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /International/संक्रमितको संख्या शून्यमा झारेर भाइरसमुक्त भइसकेको देशमा अचानक लकडाउन फेल !
काठमाडौं। कोरोनाभाइरसबाट संक्रमित सबै बिरामी उपचार गरेर निको भएपछि कोरोनाभाइरस मुक्त घोषणा भइसकेको देश न्यूजिल्याण्डमा अचानक कडा लकडाउन पनि फेल भएको छ । संक्रमितको संख्या शून्यमा झारिसकेपछि न्यूजिल्याण्ड विस्तारै सामान्य अवस्थातर्फ फर्किंदै थियो । यही बीचमा देशको सबैभन्दा ठूलो शहर अकल्याण्डमा एक परिवारका ४ जना संक्रमित देखिएपछि शहरमा कडा लकडाउन गरिएको थियो । तर, कडा लकडाउनका बावजुद संक्रमण अकल्याण्डबाट देशका अन्य क्षेत्रमा फैलिएको त्यहाँका स्वास्थ्य अधिकारीहरुले शुक्रबार बताएको समाचार एजेन्सी एएफपीले लेखेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्री क्रिस हिपकिन्सले देशमा समुदाय स्तरमा संक्रमण फैलिएका १२ थप केस र एउटा सम्भावित केस भेटिएको बताएका छन् । यही हप्ता अकल्याण्डमा संक्रमण भेटिएपछि शहरमा संक्रमण फैलिन नदिन कडाइ गरिएको थियो । पछिल्लो पटक भेटिएका संक्रमितमध्ये २ जना टापु शहर टोकोर्नाको उत्तरमा भेटिएका छन् जुन ठाउँ अकल्याण्डबाट २१० किलोमिटर दक्षिणमा पर्छ । अकल्याण्डमा कडा लकडाउन र सीमा सिल गर्न सुरक्षा उपकरणसहित पुलिसकर्मीको व्यापक परिचालनका बावजुद अकल्याण्डबाहिर संक्रमण भेटिएको हो ।
हिपकिन्सले संक्रमण फैलिन नदिने प्रयास असफल हुनुको अर्थ अब भाइरस कहीँ पनि व्यापक रुपमा फैलिन सक्ने त्रास उत्पन्न भएको बताए । ‘सबै नयाँ केसहरु एक अर्कासँग सम्बन्धित छन्, यिनीहरु सबै अकल्याण्डमा आधारित एउटै क्लस्टरका हिस्सा हुन जुन राम्रो खबर हो’ हिपकिन्सले टोकोर्नाको केसको पनि छिटै पहिचान भएको बताउँदै भने ‘हामीले उपचार गरिरहेको अकल्याण्डको केसबाहेक अरुसँग सम्बन्धित भएका कुनै पनि केस अकल्याण्डबाहिर देखेका छैनौं ।’ प्रधानमन्त्री जेसिन्डा आर्डर्नले शुक्रबार बेलुका नै अकल्याण्डको लकडाउन थप गर्ने वा लकडाउनको क्षेत्र विस्तार गर्नेबारे घोषणा गर्ने तय छ ।
यसअघि १०२ दिनसम्म अकल्याण्डमा एउटा पनि संक्रमणका केस थपिएका थिएनन् तर मंगलबार अकल्याण्डका एक परिवारका ४ सदस्य पोजेटिभ पाइएपछि यहाँ कडाइ गरिएको थियो । संक्रमण बढ्दै गएपछि अधिकारीहरुले अकल्याण्डको परिवार कसरी संक्रमित भयो भन्ने खोजी गरिरहेका छन् । यो परिवारको संक्रमणको स्रोत अझै पहिचान हुन सकेको छैन ।
दार्जिलिङ पुगेर भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले यो के गरे यस्तो ? विश्वभर हलचल, तनावमा चीन